Moet & Chandon Ice Imperial ~ ICT.com.mm
HomeMoet & Chandon Ice Imperial
Moët & Chandon Ice Impérial Chardonnay: 20% Pinot Noir: 40% Pinot Meunier: 40% Alcohol: 12% Demi-Sec/NV Espernay, Champagne/ France ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Moet & Chandon Ice Imperial ရှန်ပိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဝိုင်နဲ့ ရှန်ပိန်တွေကို ထုတ်လုပ်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊... [Learn more]
ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Moet & Chandon Ice Imperial ရှန်ပိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဝိုင်နဲ့ ရှန်ပိန်တွေကို ထုတ်လုပ်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ Reims မြို့ Champagne ဒေသကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Champagne Blend ရောစပ်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အနီရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Noir စပျစ် (40%) ၊ ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံးအဖြူရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Chardonnay စပျစ် (20%) ၊ နက်မှောင်တဲ့အခွံနဲ့ Sparkling ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Pinot Meunier စပျစ် (40%) တို့ဖြင့် ရောစပ် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု ၁၂% ရှိတဲ့ Demi-Sec/NV (Sparkling - Sweet and Spritzy) ရှန်ပိန်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Demi-Sec ဆိုတာက ရှန်ပိန်တစ်လီတာမှာ သကြားကျန်ရစ်မှု ၃၂ ဂရမ်ကနေ ၅၀ ဂရမ်အထိ ရှိတဲ့ ရှန်ပိန်ဝိုင်တွေကို ခေါ်ဝေါ်တဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Non Vintage (NV) အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် အသီးသီးနှစ် မတူတဲ့စပျစ်တွေကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး နံပါတ်တစ် Demi-sec ရှန်ပိန်ဝိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အစပ်ကဲတဲ့ အာရှအစားအစာအမျိုးမျိုး၊ မက်မန်းသီးနဲ့ အနက်ရောင်ဘယ်ရီသီးတွေပါဝင်တဲ့ အသုပ်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ကိတ်၊ ခရင်မ်အချိုပွဲတွေနဲ့လည်း တွဲဖက်နိုင်ပြီး စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘလူးဘယ်ရီနဲ့ Raspberry အသီးတွေနဲ့လည်း တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
A dense color of light gold with floral highlights. A lively, intense bouquet of red fruits (wild strawberry, raspberry, cherry) floral nuances of rose. Subtle fizzy and quince palate.
Nicely pair with variety of spicy Asian food, salad with almonds and cranberries. Desserts and fruits platter with strawberries, blueberries and raspberries.